Kutumirwa kwemakomputa uye mahwendefa kwakashanduka sei mune post-denda | Linux Addicts
Diego ChiGerman Gonzalez | 03/11/2021 16:31 | Noticias
Chikamu chechipiri chegore ra2021 chinogona kutorwa sechokutanga chedenda repashure. Kunyangwe dzimwe nyika dzichiona huwandu hwakanyanya hwekupararira, yaive yekutanga iyo nyika zhinji dzakasiya zvirambidzo zvakasimba. saka, zvinozoitika kuziva kuti kutakura kwekombuta kwakashanduka sei zvichienzaniswa negore rapfuura.
1 Kutakura kwakashanduka sei pamusika wepasi rose?
Kutakura kwakashanduka sei pamusika wepasi rose?
Maererano ne ongororo yehunyanzvi hwekupa mazano Canalyst, musika wemakomputa edesktop, mabhuku ekunyorera uye mahwendefa akakura ne10%, iyo inoshandura kuita 121,7 miriyoni zvikamu. Lenovo achiri mambo. Yakanga iine kukura kwe23% inosvika 24,7 mamiriyoni emamiriyoni akatumirwa. Apple yakaramba iri pachinhanho chechipiri nekukura kwe5% iyo inoita kutumirwa kwese kwemamiriyoni makumi maviri nemazana matanhatu. HP, kune chikamu chayo, yakatumira 20,6 miriyoni zvikamu, 18,6% kupfuura gore rapfuura.
Chikamu chakakura zvakanyanya yaive yeChromebooks, iyo yakawedzera 75% pagore, izvo zvinoreva huwandu hwekutakura kwemamiriyoni gumi nemazana mapfumbamwe emamiriyoni. Vashandisi veLinux vanogona kunyatsofunga nezvemashoko akanaka aya, sezvo mamodheru achangoburwa ane rutsigiro rwekuiswa kweLinux application.
Kuita kwakaipisisa kwaibva pamahwendefa, iyo kukura kwayo mukota yechipiri yakawedzera 4% gore-pa-gore, inosvika 39,1 miriyoni zvikamu.
Chromebooks inoratidzika sechikamu chinobatsira kwazvo kune vagadziri vemidziyo yemazita. Panyaya yekukura, HP yakaiswa pekutanga iine 4,3 miriyoni zvikamu uye kukura kwe116% mukota yechipiri. Lenovo yakauya yechipiri iine 2,6 miriyoni mayunitsi kumusoro 82% kubva pagore rapfuura. Acer iri pachinzvimbo chechitatu nekukura kwe83,0% kana 1,8 miriyoni mayunitsi akatumirwa.
Brian Lynch, muongorori pazano, akati:
Kubudirira kweChromebooks kuri kuratidza kusimba
Kukura kwavo kwakagara kupfuura kureba kwedenda, sezvo vakabatanidza chinzvimbo chine hutano muzvikamu zvese zvevashandisi vechikamu. kunyangwe misika yakakosha seNorth America neWestern Europe yatanga kuvhura zvikoro, zvinotakurwa zvinoramba zvakakwirira nepo hurumende uye ecosystems yedzidzo inoronga kubatanidzwa kwenguva refu kweChromebooks mumaitiro ekudzidza edhijitari. Ne Chrome mastering munzvimbo yakachengeteka yedzidzo, Google yakagadzirira kubheja zvakanyanya pachikamu chekutengesa gore rino. Isu tinotarisira kuona tarisiro yakasimba yekukwezva mabhizinesi madiki ane masevhisi akagadziridzwa senge "Individual" nhanho yekunyorera yeGoogle Workspace uye kukwidziridzwa paCloudReady marezinesi ekudzoreredza maPC ekare kuti aendeswe pamwe chete nemauto eChromebook aripo. Nekudaro, sezvo Apple ichida kuwedzera budiriro yayo yeM1 kunzvimbo yekutengesa uye Microsoft yakaburitswa Windows 11, PC inoshanda system mujaho ndiyo ichave yakakwikwidzwa zvakanyanya munguva refu.
Mumusika wehwendefa, havasi vese vanogadzira vakawana mhedzisiro yakafanana, kunyangwe zvakazara, zvinotumirwa kune nzira yekugovera zvichiri kukwira kupfuura denda risati rasvika.
Heino Apple anotungamira ine 14,2 miriyoni iPads yakatumirwa. kunyange zvazvo yakanga yadzikira zvishoma. Samsung yakawedzera kutumira ne13,8% kusvika 8 miriyoni mayunitsi akatumirwa. Asi, iyo yakanyanya kukura yaive Lenovo ine 78%, kutumira 4,7 miriyoni zvikamu.
Nezvezvatingatarisira mune ramangwana, Himani Mukka mumwe muongorori akati kambani yake:
inotarisira kuona kubatanidzwa kwakawanda pakati pehwendefa nePC, zvichibvumira shanduko yakapfava yekufambiswa kwebasa pakati pezvishandiso zvakasiyana, iyo ichanyanya kukwezva kune avo vanoshandisa hybrid uye on-the-go work styles. Izvi zvichave zvakadaro kune iPads uye Macs, asi kuiswa kwe Windows 11 mugore uye kushandiswa kwayo pamidziyo inogona kumhanya Android bodes zvakanaka kune vatengesi vemapiritsi, vashandisi, uye vanogadzira mhiri kweiyo ecosystem.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kutumirwa kwemakomputa uye mahwendefa kwakashanduka sei mune post-denda
PINN, imwe nzira uye mutsivi weNOOBS iyo ichakubvumidza iwe kuti uwedzere paRaspberry Pi yako